Rahaaf Mohaammed: 'Dubartootni Sawudii akka garbaatti ilaalamu' - BBC News Afaan Oromoo
Rahaaf Mohaammed: 'Dubartootni Sawudii akka garbaatti ilaalamu'
Goodayyaa suuraa Ministira Haajaa Alaa Kiristiyaa Firiilaandi
Mucayyoon maatii ishee baqattee baate Kanaadaatti koolugaltummaa argatte, bahuun koo miidhaa narraa hanbiseera jette.
Amma jireenya mataa ishee karaa bilisa taheen eegaluu ishees himteetti.
Rahaaf umuriin ishee waggaa 18 yoo tahu Taayilaandi seenuun erga hoteela tokko keessa turtee karaa tiwiiteri akka biyyichaa hin baafamneef gargaarsaaf iyyachuun ishee akka xiyyeffannooo miidiyaa argattu taasiseera.
Yoon gara maatii kootti deebi'e na ajjeesu jechuun sodaa qabdu ibsaa turte.
Dubartootni Sawudiitti akka meeshaa ykn garbaatti ilaalamu malee mirgi isaanii hin kabajamu jette.
Anis seenaa koo fi waan Sawudiitti raawwatu uumatatti himuun barbaada jette.
Akka seera mootota Sawudiitti dubartootni Sawudiin ala biyya biraa deemuuf, alatti barachuuf, heerumuuf fi mana hidhaatii illee bahuuf eeyyama dhiirotaa barbaachisa.
Eeyyama warra dhiiraa malee wantoota kana raawwachuu hin danda'an.
Rahaaf maatiin ishee miidhaa qaamaa fi xiin-sammuu akka irraan gahaa turan haasofti. Jalqaba ji'oota jahaaf mana itti cufanii tursiisuu himti.
Rafaaf maqaa al Qunnun jedhamuunis kan beekamtu yoo tahu jalqaba rifeensa ishee waan gaggababsitee murteef maatiin ishee tarkaanfii irratti fudhatan.
Akka amantaa Islaamaatti akka dhiirotaatti uffachuunis tahe rifeensa sirreeffachuun dhorkaadha jette.
Haadhaa koo fi obboleessikoo akka malee miidhaa narraan gahaa turanis jette.
Haleellaa shororkeessitootaa Naayiroobiin namootni ajjeefaman 21 gahan
Oromiyaatti 'Imala qilleensarraa malee haleellaan qilleensarraa hin turre'
Jalqaba erga maatii ishee irraa osoo gara Kuweetitti imalanii adda baatee Taayilaandi galtee yaaliin gara Awustiraaliyaatti deemuuf goote hin milkoofne.
Sababni isaa ammoo dippiloomatotni Sawudii Viizaa ishee harkaa waan fudhataniif.
Boodas erga miidiyaaleen waa'ee ishee gabaasanii Dhaabbatni Mirga Namoomaa deeggaruun karaa Dhaabbata Mootummota Gamtoomanii kolu-galtummaa akka argattu tahe.
Rahaaf yoo imalli ishee hin milkaa'u tahe osoo maatiin ishee deebisanii fudhatanii hin ajjeesiin 'akkamiin jireenya koo xumura' jettee yaadaa akka turte miidiyaaletti himteetti.
Naman barbaadeefi yeroon barnbaadetti heerumuu, barumsa koo haalan barbaadeen bilisa tahee barachuu fi kaan irratti murtoo kootiin deemuun na gammachiisa jettee, ''ani nama carraa qabeettiidha'' jette.
Murtoo du'aa maatii akka malee naasisse
Torbee darbe Ministirri muummee Kanaadaa Jastiin Tiruuduu biyyi isaanii akka ishee simattu ibsanii guyyaa tokko booda gara Kanaadaatti imaluun Ministira Haajaa Alaa Kiristiyaa Firiilaandi'n simatamte.
"Amma nagaan qaba,biyya mirga namaa kabajju keessan jira,'' jette.
Dabalataan akkan lammaffaa dhaladhettan ilaal jettee akkuma nama kamii barumsakoos itti fufee hojiis barbaadadheen jiraachu barbaada jette.
Akkuma achi geessenis simannan taasifameefii bakki turtii kennameeraaf. Haa tahu malee karaa miidiyaalee hawwasaa doorsifni waan ishee dhaqqabuuf namni ishee tiksu dhunfaatti ramadameeraaf.
Sawudiin ammoo sababa kanaan daldala Kanaadaa waliin qabdu akka dhaabdu himuun ambaasadara Kanaadaa Sawudii jirus biyya isheetii baasteetti. Kanaadaan dhimma bulchuunsa motota keenyaa keesa galteetti jechuun qeeqxi.